Iwo mweya usati waona, kuwirirana mukati kunofanira kuve kunowanikwa, uye maziso enyama anoitwa asvinudzwa pane zvese kunyepedzera.
Pasi rino, Mudzidzi, ndiyo Horo yeKusuwa, mune iyo yakaiswa munzira yeakaomeswa zvisungo, misungo yekubata Ego yako nekunyepedzera inonzi "Great Heresy (Seppareness.")
Vol. 1 FEBRUARY, 1905. Nha. 5
MWEYA mufambo usingagumi, kubva kune yakapfuura yakapfuura, uye kupfuura, kuenda mukusafa ramangwana. Mukuziva kwayo kukuru mweya usingaperi, hauchinji, hauperi.
Chishuvo chekuda kusunga mweya mukati maro mairi, zvisikwa zvakapa mueni wake kusafa zvakawanda zvipfeko zvakasiyana-siyana zvaakaruka zvine hungwaru pamwechete mumuviri mumwe. Imo kuburikidza nemuviri uyu kuti hunhu hunogoneswa kukanda kubwinya kwake pamusoro pemweya uye kudzamisa kunzwisisa. Manzwiro iwo mashiripiti anofamba ayo masikirwo aunotora.
Kubwinya ndiko kupenga kwemashiripiti kunohunzwa nezve mweya. Kuita girini kunoita kuti zvinyengeri zvive nemavara-mavara, kuti zvive zvinokwezva, mweya unonhuhwirira wezvinonhuwirira kuti uwane simba, zvinofadza zvinofadza izvo zvinogutsa chishuvo uye zvinomutsa kuravira, uye kubata kwakapfava kunotanga neropa kuyerera mumuviri uye inofadza pfungwa.
Zvinoita sei mweya zvakasikwa. Kubatwa nyore sei. Izvo zvisine mhosva zvakadii. Zviri nyore sei kuti webhusaiti yezvinhu zvisiri zvechokwadi inotenderera pamusoro payo. Masango anonyatsoziva kubata kwake muenzi. Kana imwe toyi ikarega kusekeresa, imwe inorongedzwa nehungwaru neayo mweya inotungamirwa zvakadzama kupinda mukati meshes yehupenyu. Iyo inoenderera ichishungurudzwa, kubatwa nekuvaraidzwa mutenderedzwa inoenderera shanduko, uye inokanganwa chiremera nesimba rekuvapo kwayo uye zviri nyore kuti ivepo.
Paunenge wakasungwa mumuviri mweya mweya unomira zvishoma nezvishoma kusvika pakuziva wega. Kuziva kuti yakange iri pasi pekupepeta kweiyo enchantress, ichikoshesa simba rews uye nekunzwisisa dhizaini yake nemaitiro, mweya unogoneswa kugadzirira kurwisa uye kuvhiringidza maturusi ake. Inozvidziyira uye inodzivirira kubva kune zvemashiripiti e-wands.
Iyo talisman yemweya iyo inozotyora chiperengo cheiyo enchantress ndeyekuziva kuti chero kana mamiriro ezvinhu chero api zvawo, Iyo isingaperi, isina kuchinja, isingafi, saka kuti Haigone kusungwa, kukuvara, kana kuparadzwa.
Iko kubwinya kwe wand wekubata kuri kunzwa. Yekutanga uye yekupedzisira iyo inofanira kukundwa. Iyo inounza mweya pasi pehuswa hwekunzwa kwese. Iko kuvhurika kuburikidza neicho zvakasikwa kunoshanda iganda uye nhengo dzese dzomuviri. Iyi pfungwa ine midzi yayo yakadzika kwazvo muchivanzika chebonde. Muchifananidzo chinoshamisa cheLaocoon, Phidias akafananidza mweya inotambudzika mumakara enyoka iyo yakakandirwa kumusoro nehure hwew. Nekutarisisa tarekisheni nyoka inotanga kusunungura.
Imwe yedzenzira iyo enchantress inoita nhapwa iri rurimi, mukanwa pamwe nekudya kwemuviri, izvo zvinopinda pasi pekuperengeka kwewar yekuravira. Nekutarisa iyo talisman mweya inoita kuti muviri udzivirire kubva pakubatwa kwe kuravira, uye inobvumira chete izvo zvinoita kuti muviri uve nehutano uye ive yakakwana kune zvayaida. Iyo yekuravira inobva yarasikirwa nekubwinya kwayo uye muviri unogashira izvo zvekupa izvo izvo zvemukati kuravira zvinongopa.
Nekushandiswa kwemashiripiti ekunhuwirira zvakasikwa zvinokanganisa mweya kubudikidza nechinhu chekunhuhwirira, uye saka zvinoshamisa pfungwa sekutendera imwe pfungwa kuti ibvise pfungwa. Asi nekutarisa talisman simba rekuperetera rakatyoka uye pachinzvimbo chemunhu ari kukanganiswa nekunhuhwirira kwezvisikwa, mweya wehupenyu unokweverwa.
Kuburikidza nenzeve mweya unokanganiswa nepfungwa yekurira. Kana zvisikwa zvichishandisa izvi wand mweya unodakadza uye kunyudzwa kusvika talisman yaonekwa. Ipapo mimhanzi yepasirese inorasikirwa netauro yayo. Kana mweya ichinzwa kuwirirana kwekufamba kwayo kwega kweimwe ruzha ichiita ruzha uye iyi magic yemasikirwo yakasikwa zvachose.
Pamusoro pemaziso echisikirwo anokanda kubwinya nekubata kweye wand wekuona. Asi nekutarisa kwakasimba pakushuvira kwekunakisa kunonyangarika, uye ruvara nemafomu zvinova hwaro hwunofungidzirwa nemweya wega. Kana mweya waona iwo kuratidzwa kwawo pachiso uye mukati mekudzika kwechisiko unofunga runako chairwo uye unosimbiswa nesimba idzva.
Kurwira kweWands kubva kune zvakasikwa kunounza kune mumwe mweya mairi maviri: ruzivo rwehukama hwezvinhu zvese, uye kuziva kuti zvinhu zvese zviri chimwe. Neidzi idzi mweya mweya unopedzisa rwendo rwawo. Iko hakusi tariro yekutarisa fungidziro dzehupenyu kana yaitwa nechinangwa chekunzwisisa kunyengedza kwayo uye nekubwinya kwenyika. Dai zvese izvi zvaigona kuoneka mafuru uye rima zvaisazopenengurwa zvechokwadi.
Izvo zvinodikanwa kuti munhu arikutsvaga chaiye atange kusagutsikana nezvose zvisiri zvechokwadi, nekuti kana mweya waizoona chaicho muhupenyu unofanirwa kugona kusiyanisa izvo zvisiri zvechokwadi.
Kana iyo pfungwa yakaroorwa uye ichidzorwa nemaitirwo enzwi, kubwinya kunogadzirwa uye masimba emweya anobviswa. Saka huyai muve zvinhu zvakaipa: vana vekutsamwa, kuvengana, godo, kusava nebasa, kudada, kukara, uye kuchiva: nyoka idzi dziri mumakara dzakanyorwa nemweya.
Hupenyu hwevanhuwo zvavo hwakateedzana kubva mukuchechesa kusvika kukweguru. Nokushamiswa kwese kwese, chifukidziro chekunakisa chakabayiwa uye chakabikwa. Kwechinguva chokwadi chinoonekwa. Asi haigoni kutsungirira. Mhute inozvivharira mukati. Uye zvinoshamisa, izvi zvinoshungurudza panguva imwechete zvinogadzirwa nemarwadzo uye zvinofadza zvinounza iwo. Iyo inofa inoramba ichingoyerera parukova rwenguva, yakatakurwa kuno nekoko, ichimhanyiswa ikaiswa mudenga remifungo, ikamhanyisa pamatombo enhamo kana kunyudzwa neshungu uye kusagadzikana, kuti isimuke igozvarwa nekutambudzika kwekufa ichienda kuna gungwa risingazivikanwe, iyo irikuno, kwainoenda zvinhu zvese zvakazvarwa. Nekudaro kazhinji uye mweya unodzungudzwa kuburikidza nehupenyu.
Muviri mumazuva ekare wakagamuchirwa semuratidziro wezvakavanzika zvepanyika ino yakagadzirirwa. Chinhu chehupenyu chaive kunzwisisa uye kuziva chizaruro chimwe nechimwe mukutendeuka: kufadza kubwinya kweiyo enchantress nekuziva kwemweya: kuita basa rechinguvana, kuti mweya uenderere mberi nerwendo. Nekuziva uku mweya une ruzivo rwekugadzikana uye rugare mukati menyika yakajeka.